Blogs Archives - YTV
“Y Music အစီအစဉ်” နဲ့အတူ နိုင်ငံတကာမှာ ကျော်ကြားနေတဲ့သီချင်းတွေနားဆင်မယ် YTV Channel ရဲ့ တေးချစ်သူပရိသတ်ကြီးတို့အတွက် နိုင်ငံတကာမှာ ကျော်ကြားနေတဲ့သီချင်းတွေကို နားဆင်နိုင်မယ့် Y Music ရဲ့ International Soung Track အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်… […]
အမေရိကန် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေး ဗဟိုဌာနများက coronavirus သည် လူများ ရှူရှိုက်မိလျှင်ပင် ထုတ်လုပ်သော အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာမှတဆင့် အမှုန်အမွှားများ သို့မဟုတ် သေးငယ်သောအမှုန်များမှ တစ်ဆင့် ပျံ့နှံ့နိုင်တယ်လို့ ၎င်းတို့ရဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်တွေမှာ air brones အဖြစ်နဲ့ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပြီလည်း […]
E-Cigarettes or Vape ကိုသောက်တာဟာမှန်ရဲ့လား…?
သင်က ဆေးလိပ်ဖြတ်ချင်နေတဲ့သူလား…?ဒါဆိုရင်တော့ အရင်ဆုံး ဆေးလိပ်ဖြတ်ချင်တာက သင်တစ်ယောက်ထဲ မဟုတ်ပါဘူးလို့ ပြောပါရစေ…ကမ္ဘာပေါ်က ဆေးလိပ်သောက်သူတွေရဲ့ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ ဆေးလိပ်ဖြတ်ချင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်… ဆေးလိပ်သောက်တာဟာ သင့် ခန္တာကိုယ် တစ်ခုလုံးကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ထိခိုက်စေပါတယ်… တကယ်တော့ ဆေးလိပ်ဖြတ်တာဟာ သင့်ရဲ့ […]
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း မုတ်သုန်ရာသီရောက်ပြီဆိုရင် ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါ ကူးစက်မှု ၊ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ၊ ဆင်တုပ်ကွေး စတဲ့ တုပ်ကွေးရောဂါများကြောင့် လူတိုင်းနီးပါး ဖျားနာခြင်း ၊ အအေးမိခြင်း စတဲ့ ရောဂါဝေဒနာတွေကို ခံစားကြရတတ်ပါတယ်. ဒါကြောင့် မိုးရာသီမှာ Covid-19 […]
တရားခံ COVID ကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်နိုင်မယ့် သက်သေခံများ
coronavirus ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ COVID-19 ရောဂါဟာ မိမိမှာ ကူးစက်ခံလိုက်ရပြီလား ဆိုတာကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ…အချို့လူတွေက ရောဂါကူးစက်ခံရပေမယ့်လည်း ရောဂါလက္ခဏာတွေကို သတိမပြုမိဘဲ အခြားသူတွေဆီကို ဆင့်ပွားကူးစက်ပြီး မလိုလားအပ်တဲ့ ကွင်းဆက်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်. ဒါကြောင့် တရားခံကိုဗစ်ရောဂါကို ခြေရာခံနိုင်မယ့် ရောဂါလက္ခဏာတွေက […]
ကိုယ်ခံအားစနစ်ဆိုတာ ကျမတို့ရဲ့ ခံစစ်တိုက်စစ်မှုးကြီးပါ. ခံစစ် အားကောင်းတောင့်တင်းနေမှသာ ကူးစက်ရောဂါတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကို ကာကွယ်တိုက်ထုတ်ရှင်းလင်း ပစ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်. မကျန်းမာတဲ့ လူနာတွေသာမက ကျန်းမာနေဆဲ လူတွေလည်း ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ကြံ့ခိုင်အောင်ထိန်းသိမ်းဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်…. ကူးစက်ရောဂါများကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ လက်များကိုသန့်စင်အောင် မကြာခဏဆေးကြောခြင်း […]